Nepali Congress should emerge as alternative force in Nepali politics
बिबेकशील साझा पार्टीको संस्कार र क्षमताशीलको नेतृत्वमा कांग्रेस अब बैकल्पिक शक्ति बन्नु पर्छ
प्रकाशन मिती: २०७४ असोज १८ गते
नेपालको राजनीतिमा एमाले, माओबादी र नयाँ शक्तिको चुनाबी तालमेल हुँदै पार्टी एकता हुने भएपछि एउटा भुइचालो नै आएको छ । सरसर्ती हेर्दा यो एकता कतिको प्रभावकारी हुने हो "पर्ख र हेर" बाट मात्र थाहा हुने छ । हो एकता हुनु, ध्रुविकरण हुनु, नेपाली नेपाली मिल्नु, नेपालको स्थायित्वको लागि सकारात्मक कुरा हो । तर देशलाई स्थायित्व र सम्वृद्धि दिन नसके यस्तो एकताको कुनै अर्थ छैन ।
नौ नौ महिना सत्ता बाँडीचुडी खाउँ भनेर गरिएको एकता, भागबन्डाको एकता, एक अर्कालाई उल्लु बनाउदै आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने एकताले देशलाई स्थायित्व दिएर बिकासको बाटोमा लान सक्दैन ? हो, हामीले मिलेर व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं अब मिलेर स्थाई सरकार बनाउछौं । देशलाई आर्थिक सम्वृद्धि र बिकासको बाटोमा लैजान्छौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकरी रास्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बनाएर, स्थाई र बलियो सरकार बनाएर जनताको मन जित्दै विकासका काम गर्छौं । यस्तो लक्ष्य लिएर गरिएको एकता हो भने त्यसको सम्पूर्ण नेपालीले स्वागत गर्नु पर्छ ।
एकता पछि बन्ने नयाँ पार्टी कम्युनिस्ट केन्द्र भन्दा बढी समाजबादी केन्द्र हुनु पर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ तर अधिकारीक नाम घोषणा नभइसकेकोले त्यसको बारेमा अहिले चर्चा नगरौ।
अबको यो परिस्थिति संगै नेपाली कांग्रेसले पनि एकपल्ट अब आफ्नो आत्मा खोतलेर भावी रणनीति तय गर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस पनि एक समाजबादी पार्टी नै हो । तर सिद्धान्त र कयौं राम्रा मान्छे हुँदा हुदै पनि कांग्रेशको नेतृत्व धेरै चुक्यो । प्रमुख त, कैयौं अवसर पाउदा कांग्रेसले देशलाई बिकाश र स्थाइत्व दिने भन्दा त्यहाँका केही नेताले कसरी आफू भन्दा अरुलाई सत्तामा जना नदिने, कसरी अरुको सरकारलाई दिगो हुन नदिने जस्ता कुरामानै रुम्मलियो । अहिलेको समयमा आएर त भ्रस्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने पार्टी, युवालाई उपेक्षा गर्ने पार्टी, असक्षमले नेतृत्व गर्ने पार्टी, अरुको रणनीति नबुझेर पछि पर्ने पार्टी, बिदेशीको इशारामा चल्ने पार्टी जस्ता लान्छाना सबभन्दा बढी कांग्रेशलाई नै लाग्छ ।
के कांग्रेस त्यति गएगुज्रेको छ त ? छैन । जे जस्तो भएपनि बाम एकताले सर्बसत्ताबाद र एकलौटी मनोमानी गर्न खोजे त्यसको सामना गर्न सक्ने अर्को पार्टी भनेको कांग्रेस नै हुन सक्छ । तर त्यसको लागि कांग्रेसले अब नेतृत्वमा ल्याउनु पर्छ २१ शताब्दी सापेक्ष युवा नेतृत्वलाई । देखाउनु पर्छ जनतालाई एक जिम्मेवार शक्ति भएर | लक्ष्य राख्नु पर्छ ५ बर्षमा युवा विदेशिने संख्यालाई आधा गरेर देखाऊने, बेरोजगारी आधा गरेर देखाऊने, बिदेसिएकालाई फर्काएर देखाऊने । पुल, बाटो, बिद्युत योजना पुरा गरेर देखाऊने । आर्थिक वृद्धि दर १० प्रतिशत ५ बर्ष निरन्तर गरेर देखाऊने । यसो गर्न नसके चाहे त्यो बाम एकताको पार्टी होस् वा कांग्रेश , केवल राजनीतिक सर्कस मात्र मन्चन भैरहन्छ देशमा।
बाम एकताले पनि गर्नु पर्ने त्यहि हो र एकताले एउटा राम्रो माहोल र उत्साह जरुर ल्याएको छ । कांग्रेसले पनि त्यस्तो माहोल र उत्साह सिर्जना गर्न बिल्कुल अग्रगामी र दुरदर्शी कदम चाल्नै पर्छ । बिबेकशील साझा जस्ता पत्यारिला, क्षमताशील, जोस र जागर भएका युवालाई पार्टीमा सम्मानजनक ठाउँ दिनु पर्छ कांग्रेसले । मूल्य, मान्यता, संस्कार र देशको बिकास र सम्वृद्धिको लक्ष लिएको बैकल्पिक शक्ति बन्न लायक पार्टी प्रजातान्त्रिक अनि इतिहास बोकेको कांग्रेश पार्टी नै हुन सक्छ । बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति को बिलय संगै अब कांग्रेसले बिबीक्शील साझा जस्तो पार्टीका कुरा गहिरोसंग सुनेर, आफुलाई पनि परिमार्जन गर्दै. युवाहरू अनि नयाँ सोचलाई समावेश गर्न सके, कांग्रेशकोले गुमाएको विश्वास पुन: प्राप्त गर्न सक्छ । तर कांग्रेसको घैटोमा घाम लाग्दैनकि भन्ने छनको गगन थापा जस्ता युवा नेतालाई गरिएको कयौं उपेक्षा बाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
साथ साथै रबिन्द्र मिश्र ज्यू, उज्वल थापा ज्यूले पनि बदलिएको परिस्थितिमा बार्ता र सम्बादका ढोका खुल्ला राख्दै देशलाई दह्रो विकल्प दिने सोच बनाउनै पर्छ ।